Google က ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Android Apps များကို ကြေညာ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Tech News Google က ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Android Apps များကို ကြေညာ
Google က ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Android Apps များကို ကြေညာ
Maung Pauk at 5:03:00 PM Tech News,
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Google က ယခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Apps များနဲ့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်မှု အများဆုံး Apps များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်မှု အများဆုံး App များထဲမှာ ယခုနှစ်ထုတ် App များကိုသာ ထည့်သွင်းထားပြီး App အဟောင်းများကို ဖယ်ချန်ထားပါတယ်။
ယခုနှစ်အတွင်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်မှု အများဆုံး App များထဲမှာ FaceApp, Mercari –Buy , Sell New & Used , Selfie Camera – Filter & Sticker & Photo Editor ,5Gold Rings UK , Don’t Ask Me Ask Britain တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
Google က ယခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး App အဖြစ် Socratic ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီဇိုင်းလှပပြီး ဥာဏ်ရည်မြင့် နည်းပညာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကျောင်းသားများအတွက် သင်္ချာ သင်ခန်းစာများကို သူက သင်ကြားပေးပါတယ်။ အခြား အကောင်းဆုံး App စာရင်းထဲမှာ Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters , What The Forecast?!! , Boomerang , TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows , Yarn –Chat Fiction တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
Google က ယခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Apps, Games , Books, Movies , TV Show များကိုလည်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး အောက်ပါ လင့်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှဈ ကုနျဆုံးတော့မှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ Google က ယခုနှဈရဲ့ အကောငျးဆုံး Apps မြားနဲ့ ဒေါငျးလုပျလုပျမှု အမြားဆုံး Apps မြားကို ထုတျပွနျကွညောလိုကျပါတယျ။ ဒေါငျးလုပျလုပျမှု အမြားဆုံး App မြားထဲမှာ ယခုနှဈထုတျ App မြားကိုသာ ထညျ့သှငျးထားပွီး App အဟောငျးမြားကို ဖယျခနျြထားပါတယျ။
ယခုနှဈအတှငျး ဒေါငျးလုပျလုပျမှု အမြားဆုံး App မြားထဲမှာ FaceApp, Mercari –Buy , Sell New & Used , Selfie Camera – Filter & Sticker & Photo Editor ,5Gold Rings UK , Don’t Ask Me Ask Britain တို့ ပါဝငျကွပါတယျ။
Google က ယခုနှဈရဲ့ အကောငျးဆုံး App အဖွဈ Socratic ကို ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ဒီဇိုငျးလှပပွီး ဉာဏျရညျမွငျ့ နညျးပညာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ကြောငျးသားမြားအတှကျ သခငြ်ျာ သငျခနျးစာမြားကို သူက သငျကွားပေးပါတယျ။ အခွား အကောငျးဆုံး App စာရငျးထဲမှာ Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters , What The Forecast?!! , Boomerang , TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows , Yarn –Chat Fiction တို့ ပါဝငျကွပါတယျ။
Google က ယခုနှဈအတှကျ အကောငျးဆုံး Apps, Games , Books, Movies , TV Show မြားကိုလညျးထုတျပွနျလိုကျပွီး အောကျပါ လငျ့မှာ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Credit : Digital Times